Haitao haingana momba ny prototyping
Teknolojia haingana momba ny prototyping, fantatra ihany koa amin'ny teknolojia prototyping haingana (teknolojia RP raha fintinina); Anglisy: RAPID PROTOTYPING (antsoina hoe teknolojia RP), na RAPID PROTOTYPING MANUFACTURING, antsoina hoe RPM. Ao amin'ny indostrian'ny fampiharana fiara mandeha amin'ny fiara antsoina hoe prototype RP. Ny teknolojia RP dia integ ...
Fanadihadiana momba ny vinavinan'ny indostrian'ny bobongolo
1. Ny vinavinan'ny tsenan'ny lasitra any Shina dia malalaka: ny fanitarana mitohy ny sehatry ny famolavolana bobongolo ary ny fepetra takiana bebe kokoa ho an'ny bobongolo eo amin'ny sehatra efa nampiharina dia nahatonga ny indostrian'ny bobongolo hivoatra haingana kokoa noho ny indostrian'ny mpamokatra hafa. Nanjary lalàna iraisana io. Th ...
Ny famakafakana ny satan'ny indostrian'ny bobongolo amin'ny taona 2020, goavana ny indostria ary tsy azo eritreretina
Ny indostria ara-batana dia nitotongana hatrany tato ho ato, ary ny indostrian'ny bobongolo koa dia voakasik'izany tokoa, fa ny tsena goavambe no mamaritra ny vinan'ny fampandrosoana. Araka ny antontan'isa ho an'ny daholobe, ny sandan'ny indostrian'ny bobongolo dia nisondrotra tamin'ny 136.731 miliara tamin'ny 2010 ka hatramin'ny 240.0 ...